ဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်း Biden ကို သမ္မတဟောင်း Obama ထောက်ခံ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်း Biden ကို သမ္မတဟောင်း Obama ထောက်ခံ
၂၀၁၇ ဇန်န၀ါရီတုန်းက သမ္မတဟောင်း Obama နှင့် ဒုသမ္မတဟောင်း Biden ကို အိမ်ဖြူတော်တွင် တွေ့ရစဉ်
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ သမ္မတလောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒုသမ္မတဟောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒင်ကို သမ္မတဟောင်း ဘာရက်အိုဘားမားက ထောက်ခံကြောင်း အင်္ဂါနေ့မှာ ကြေညာလိုက်ပြီး ဘိုင်ဒင်ဟာ နိုဝင်ဘာလ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိသမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နေရာကို ရယူဖို့ အကောင်းဆုံးသူတယောက် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ် မူတည်နေကြောင်းနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတ ထရမ့်ကိုလွယ်လွယ် နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ အခြေနေကို ရောက်ဖို့် ဘိုင်ဒင်ရဲ့ မဲဆွယ်အဖွဲ့ကို ထောက်ခံကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူနာတွေကို သတ္တိရှိရှိ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြုစု စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကို သမ္မတဟောင်း အိုဘားမားက ချီးကြူးခဲ့ပေမယ့် ထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့ ဒီရောဂါကိုဦးဆောင် ဖြေရှင်းပေးမှု မရှိဘူးလို့လည်း ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့သမ္မတသက်တမ်းမှာ ဘိုင်ဒင့်ကို ဒုသမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တာဟာ သူ့ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် တခု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့. အခုလို အချိန်မျိုးမှာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ လိုအပ်တဲ့ သမ္မတတွေမှာ ရှိရမယ့် အရည်အချင်းမျိုး ဂျိုးဘိုင်ဒင်မှာ ရှိတယ်လို့ သူယုံကြည်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက အများအပြား ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး မနှစ်က နှစ်လည်လောက်မှာ မဲဆွယ်ပွဲတွေ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမားဟာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူ အများအပြားနဲ့ သီးသန့် ဆွေးနွေးမှုတွေပဲ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီ။ အခုမှ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ကို ထောက်ခံကြောင်း ပထမဆုံး ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရကျပါတီသမ်မတလောငျး Biden ကို သမ်မတဟောငျး Obama ထောကျခံ
ဒီမိုကရကျတဈပါတီရဲ့ သမ်မတလောငျးအဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဒုသမ်မတဟောငျး ဂြိုးဘိုငျဒငျကို သမ်မတဟောငျး ဘာရကျအိုဘားမားက ထောကျခံကွောငျး အင်ျဂါနမှေ့ာ ကွညောလိုကျပွီး ဘိုငျဒငျဟာ နိုဝငျဘာလ ကငျြးပမယျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ လကျရှိသမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့နရောကို ရယူဖို့ အကောငျးဆုံးသူတယောကျ ဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အမရေိကနျရဲ့ အနာဂတျဟာ ဒီရှေးကောကျပှဲပျေါ မူတညျနကွေောငျးနဲ့ ဒီရှေးကောကျပှဲမှာ သမ်မတ ထရမျ့ကိုလှယျလှယျ နိုငျဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ သတိပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမရေိကနျပွညျသူတှေ ပိုကောငျးမှနျတဲ့ အခွနေကေို ရောကျဖိျု့ ဘိုငျဒငျရဲ့ မဲဆှယျအဖှဲ့ကို ထောကျခံကွဖို့လညျး တိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး လူနာတှကေို သတ်တိရှိရှိ ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ပွုစု စောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့ ကနျြးမာရေးလုပျသားတှကေို သမ်မတဟောငျး အိုဘားမားက ခြီးကွူးခဲ့ပမေယျ့ ထရမျ့အစိုးရအဖှဲ့ ဒီရောဂါကိုဦးဆောငျ ဖွရှေငျးပေးမှု မရှိဘူးလို့လညျး ဝဖေနျခဲ့ပါတယျ။
သူ့သမ်မတသကျတမျးမှာ ဘိုငျဒငျ့ကို ဒုသမ်မတ အဖွဈ ရှေးခယျြခဲ့တာဟာ သူ့ဘဝမှာ အကောငျးဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြ တခု ဖွဈခဲ့ကွောငျးနဲ့. အခုလို အခြိနျမြိုးမှာ အမရေိကနျပွညျသူတှေ လိုအပျတဲ့ သမ်မတတှမှော ရှိရမယျ့ အရညျအခငျြးမြိုး ဂြိုးဘိုငျဒငျမှာ ရှိတယျလို့ သူယုံကွညျကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။
အမရေိကနျသမ်မတအဖွဈ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့ ဒီမိုကရကျတဈပါတီက အမြားအပွား ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပွီး မနှဈက နှဈလညျလောကျမှာ မဲဆှယျပှဲတှေ စတငျခဲ့တာ ဖွဈပမေယျ့ သမ်မတဟောငျး ဘားရကျအိုဘားမားဟာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသူ အမြားအပွားနဲ့ သီးသနျ့ ဆှေးနှေးမှုတှပေဲ လုပျခဲ့တာ ဖွဈပွီ။ အခုမှ ဂြိုးဘိုငျဒငျကို ထောကျခံကွောငျး ပထမဆုံး ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။